Iseti yesipho Abavelisi | Iseti yeZipho zaseChina abaXhasi kunye neFektri
Le ngqokelela yoyilo lwethu olutsha, igqabi eliluhlaza yeyona nto ithandwayo kulo nyaka. Siyisebenzisa kwiseti yesidlo sangokuhlwa esinganeli ukutya kuphela sinokuhombisa ikhaya lakho. Olu dibana luyaziwa kakhulu kwihlabathi.
Olu luphawu oluphezulu lwezipho ezisetiweyo ezinamagqabi aluhlaza angenza ipleyiti, iseti yekofu, iiggs, iti, indebe nesosi, isitya sesaladi, itreyi yesandwich kunye nokuma kwekhekhe njalo njalo, ukuba uyayithanda le ndlela kodwa imveliso eyahlukileyo, nceda uzive ukhululekile Nxibelelana nathi ukuze ufumane.
Iphethini yasentwasahlobo kunye nehlobo, into yeZipho, iseti yemihla ngemihla yokuseta isidlo sangokuhlwa
Le ngqokelela uyilo lwethu olutsha, i-swan yeyona nto ithandwayo kakhulu kulo nyaka. Siyisebenzisa kwiseti yesidlo sangokuhlwa esinganeli ukutya kuphela sinokuhombisa ikhaya lakho. Olu dibana luyaziwa kakhulu kwihlabathi.
Olu luphawu oluphezulu lwezipho ezibekwe ngothotho lwe-swan lunokwenza ipleyiti, iseti yekofu, iiggs, iti, indebe kunye nesosa, isitya sesaladi, itreyi yesandwich kunye nokuma kwekhekhe njalo njalo, ukuba uyayithanda le ndlela kodwa imveliso eyahlukileyo, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana ukuba sifumane.
Eyona nto idumileyo iseti yeCactus Isidlo sangokuhlwa kunye nezinto zesipho
Le ngqokelela yoyilo lwethu olutsha, i-cactus yeyona nto ithandwayo kulo nyaka. Siyisebenzisa kwiseti yesidlo sangokuhlwa esinganeli ukutya kuphela sinokuhombisa ikhaya lakho. Olu dibana luyaziwa kakhulu kwihlabathi.
Olu luphawu oluphezulu lwezipho ezisetiweyo zecactus uthotho zinokwenza ipleyiti, iseti yekofu, iiggs, iti, indebe kunye nesosara, isitya sesaladi, itreyi yesandwich kunye nokuma kwekhekhe njalo njalo, ukuba uyayithanda le ndlela kodwa imveliso eyahlukileyo, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana ukuba sifumane.
Le ngqokelela uyilo lwethu olutsha, izinto zothando yeyona nto ithandwayo kulo nyaka. Siyisebenzisa kwiseti yesidlo sangokuhlwa esinganeli ukutya kuphela sinokuhombisa ikhaya lakho. Olu dibana luyaziwa kakhulu kwihlabathi.
Izinto eziphathekayo: i-china bone bone
Izinto eziphathekayo: i-china bone bone kunye ne-china bone